Masar oo Golaha Ammaanka QM ka codsatay inuu soo farageliyo muranka Wabiga Nile | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Masar oo Golaha Ammaanka QM ka codsatay inuu soo farageliyo muranka Wabiga Nile
Masar ayaa Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ka codsatay wadaxaajoodka seddex geesoodka ee ku saabsan biyo xireenka ay Itoobiya ka dhiseyso wabiga Nile inuu soo farageliyo.
Laga billaabo toddobaadkii la soo dhaafay waxaa seddexda dal u socday wadaxaajood dhanka muuqaal aragga oo u dhaxeeyey guddiyada farsamada.
Iyada oo ay dalalku sheegeen wadahadallada meel fiican iney marayaan oo wax badan ay isku afgarteen haddana Masar ayaa sheegtay in arrimihi muhiimka ahaa aan lagu heshiinin cabashadeedana u gudbisay Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay.
Masar inta ay cabashadeeda si rasmi ah ugu gudbin Qaramada Midoobay, wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Deguu Andargachew wuxuu warbaahinta dalka Itoobiya uu toddobaadki hore u sheegay Masar iney diyaar u ahayn in wadahadal wax weliba lagu dhammeeyo oo ay dooneyso Itoobiya iney cadaadis siyaasadeed oo ka baxsan wadahadallada ay saarto.
“Mar wadaxaajoodka ayey qayb ka yihiin marna beesha caalamka oo uu ugu horreeyo Golaha Ammaanka iney muranka u gudbiyaan ayey dadaal xooggan ugu jireen” ayuu yiri Wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya.
Itoobiya: “Masar waxay carqaladeyneysaa wadahadallada seddex geesoodka ee socda”
Wasaaradda arrimaha dibadda Masar waxay maalinti shalay ahayd ka hadashay sababta Maar ku kalliftay iney golaha ammaanka ka codsato arrintan iney soo farageliso: “go’aankan iney qaatay iney ku kalliftay mowqifka ay Itoobiya iska taagtay arrimaha la isku hayo oo aan wanagsaneen isla-markaana uu daba jiitamaya wadahadalki muranka xal looga raadin lahaa.”
Halka ay wasaaradda Itoobiya dhankeeda Talaadadi sheegtay madax adayga Masar iyo Mowqifka adag ee ay taagan tahay uu caqabad ku noqday wadaxaajoodka heshiis in lagu soo afjaro.
Waxayna wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ay Masar ku eedeysay iney dooneyso biyaha Wabiga Nile iney keligeed isticmaasho.
Itoobiya waxay sheegtay iney kulanka wadahadalka seddex geesoodka ee ugu dambeeyey ay ku soo bandhigtay qorshaheeda ku aaddan biyaha biyo xireenka uu u baahan sida loo buuxinaya iyo sida biyaha Mashruuca loo maareynayo.
“Halka wadaxaajoodka heshiis lagu soo afmeeri lahaa, waxay Masar caadeysatay iney magaca Itoobiya ay wasaqeyso oo ay beesha caalamka magac xumo u geliso.” ayey tiri wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya.
“Ujeedkan wadaxaajoodka seddex geesoodka ee dhex maraya Masar, Itoobiya iyo Suudaan mabaadiida u ku fadhiyo ayaa wuxuu yahay in wax lakala qaato waxna la isasiiyo, annaguna waxaan la xaajooneynaa dhinacyo aan dooneyn iney cidkale wax siiyaan ama doonayo wax weliba iney iyagu qaataan.”
Dowladda Itoobiya waxay sheegtay biyo xireenka weyn ee laga dhisayo galbeedka dalka Itoobiya dhismahiisu inkasta oo 100% la dhammeystirin haddana toddobaadyada soo socda in la billaabay qabashada biyaha mashruuca ee ugu horreeyey.
Bilooyin ka hor wadahadallo ay dhexdhexaadiyeyaal ka ahaayeen Mareykanka iyo Bangiga Adduunka oo lagu qabtay Washington DC ayaa natiija la’aan ku soo gabagaboobay.
Wixi ka dambeeyey Itoobiya marki ay ku dhawaaqday laga billaabo bisha July ee soo socota in biya qabatinka la billaabayo Masar waxay wadday tallaabbooyin kala duwan oo ay Itoobiya cadaadis ku saareyso.
Wasaaradda Arrimaha Itoobiya muranka Masar maxay ka tiri?
Image captionWasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Gadu Andargachew
Wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya waxay Talaadadi sheegtay Masar inay ku dooneyso biyaha Wabiga Nile iney keligeed isticmaasho, taasina ay caqabad ku noqoneyso wadahadallada seddex geesoodka ee socda.
Wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya Gaduu Andargachew oo qabtay shir jaraa’id oo ku saabsan wadahadallada seddex geesoosdka ee u dhaxeeya Masar, Itoobiya iyo Suudaan oo maalintiisi Shanaad socda ayaa sheegay mowqifka Masar ay ku adkeysaneyso ee ah in siday iyadu rabto oo keli ah la yeelo taas oo wadahadalka caqabad ku ah.
Wasiirku wuxuu sheegay in Masar ay ku adkeysaneyso sida caadadaba u ahayd labadi mowqif oo lagu yaqiinnay.
Wabiga Nile: Suudaan oo ka biyo diidday hadal ka soo yeedhay Itoobiya
“Masar – lugna wadahadalka seddex geesoodka ayey kula jirtaa lugna waxay saaratay golaha aammaanka ee qaramada midoobay,” ayuu yiri.
Masaaridu marweliba waxay doonayaan in la siiyo wixii ay jecel yihiin balse iyagu marnaba diyaar uma ah iney cid kale wax siiyaan.
Waxaa cirka isku sii shareeraya muranka u dhaxeeya xukuumadaha Addis Ababa iyo Qaahira ee salka ku haya biya-xireenka Itoobiya ay ka dhiseyso galbeedka dalkaasi.
Dowladda Masar waxay beenisaa in ay iyada dooneyso in heshiiska waxa uu noqonayo ay maamusho, waxayna ku doodeysaa in ujeedadooda ay tahay in ay xaqiijiyaan in beerahooda ku tiirsan wobiga Nile aysan biyo la’aan noqon.
“Masar waxay weli ku adkeysaneysaa Mowqifkeedi ahaa inta khilaafka heshiis buuxda laga gaarayo ineysan Itoobiya billaabin carra tuurka keydinaya biyaha iyo biyo-xireenka ay dhiseyso uu u baahan yahay,” ayuu yiri Mr Gadduu.
Image captionWabiga Nile
“Itoobiya waxay aaminsan tahay iney Wabiga Nile ee ka soo billowda dalkeeda ay iyadu leedahay xalkuna ay iyadu go’aamineyso, Masar na, maadaamaa ay arrintaas u cuntami la’dahay darteed in ay wadahadalka qayb uga tahay, balse Itoobiya waxay aaminsan tahay in waxweliba wadahadal lagu dhammeyn karo”, ayuu yiri.
Wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya wuxuu sheegay nabadda iyo horumarka Itoobiya iney shacabka Masar waxba ka faa’ideyn, balse dowladaha isku bedbeddalay Masar waxaan arkeynaa iyada oo ay arrintaasi u cuntami la’dahay oo ay marweliba doonayaan waddan kale waxa uu xaq u leeyahay iney qaataan iyagu ay waddamada kale waxba u oggolaan.
Wuxuuna Madaxda Masar uu weydiiyey sababta ay ugu farxayaan iney shucuubta Itoobiya ay qarniyo mugdi ku noolaadaan ay kheyraadkooda ka faa’ideysan?
“Beesha caalamkana waxaan u sheegayaa iney xaaladdu iney la socdaan oo ay ogaadaan mowqifka Itoobiya iyo Mowqifka Masar sida ay u kala fog yihiin,” ayuu yiri Wasiirka Arrimaha Dibadda Itoobiya Gaduu Andargachew.
Itoobiya ayaa ka carootay in Masar ay ugu gooddisay in khilaafka u dhexeeya labada dal ay horgeyn doonto Qaramada Midoobay.
Iyada oo ay hadda socdaan wada-hadallo u dhaxeeya dalalka isku haya wobiga Nile, waxay diiradda saarayaan sidii xal loogu heli lahaa muranka ka dhashay biya-xireenka hase yeeshee waxaa soo baxaya in illaa iyo hadda heshiis laga gaari la’yahay murankan, iyada oo ay horay u guul darreysteen dadaallo lagu doonayey in lagu dhexdhexaadiyo labada dhinac.
Masar waxay sheegtay in haddii wadahadallada hadda socda ay guul darreystaan ay raadineyso xal kale oo muranka Wabiga Nile lagu xalliyo. Sida iney u dacwooto golaha ammaanka Qaramada Midoobay, taas oo Itoobiya ay ka carootay.
Itoobiya na waxay sheegtay in haddii Masar ay ka baxdo shirka wadaxaajoodka seddex geesoodka ee hadda socda ay Itoobiya wadaxaajood dambe ka qayb geli doonin.
Wadahadallada hadda socda ee u dhaxeeye Itoobiya, Masar iyo Suudaan waxaa dhexdhexaadinaya Midowga Yurub, Mareykanka iyo Koonfur Afrika oo haatan ah guddoomiyaha Midowga Afrika.
Maxaa la isku mari la’yahay?
“Masar iyo Suudaan oo dhinac ah waxay doonayaan in dhismaha biyo xireenka uu qaatay 7 -12 sana oo si tartiib ah loo wado, Itoobiya na waxay dooneysaa dhismaha mashruuca biya xireenka maadaamaa uu marayo 70%, in ay bisha July billaabaan dhameystirka oo muddo laba sannadoodna.
“Qodobka ugu weyn ee muranka waa kaa, kan labaad waxaa weeye Masar oo dooneysa in sannadki ay hesho biya gaaraya 46 malyan oo Cubic Metiro oo aan gorgortan gelin iney ka helaan Blue Nile-ka.”
“Waxaa kale oo ay rabaan guddi iskudhaf ah oo ah labada dowladood ee Masar iyo Itoobiya ka socda (Joint Commission) in ey hubiyaan naqshadda biya xireenka ay Itoobiya dhiseyso si ay u hubiyaan amnigiisa iyo dhammaan naqshaddiisa inuu yahay mid wax ku ool ah oo aan dhib ugeysaneyn waddamada Masar iyo Suudaan. Haddii uu biya xireenka culeys uu ku yimaaddo ama uu dhib ku dhaco biya xireenkaasi.”
“Labada waddanba culeysyo ayaa haysta waloow culeyska ugu badan uu saaran yahay dalka Masar oo 90% wax soo saarkiis beeraha iyo noolasha shacabkaba ay ku tiirsan tahay biyaha wabigan, halka Itoobiya na ay haysato koronto yar ayna u baahan tahay in koronto xoog leh ay ka hesho biyo xireenka”.
“Taas waxay u jeedadeedu tahay in dalkaasi dhinaca horumarka uu uga faa’ideysto, xalkuna wuxuu ku jiraa labada dal oo tanaasulaad la yimaaddo,” ayuu Cusmaan Maxamed Badmaax oo ku takhasusay dhaqaalaha iyo shuruucda caalamiga oo BBC u warramay.
Masar oo Golaha Ammaanka QM ka codsatay inuu soo farageliyo muranka Wabiga Nile was last modified: June 20th, 2020 by Admin
Dhageyso: Dhalinyaro Oo Shaqo Abuur Unoqotey Ka Shaqeynta Baararka.
Coronavirus: Khubaro eegeysa in shacabka oo dhan ay wejiga xirtaan
TOOS U VIDEOGA CIIDAMDA DOWLADA GOBOLEEDKA KGS IYO CIIDMADA DOWLADA DHEXE AYAA HOWLGALO KAWADA IN TA UDHAXEYSA HUDUR .
Hooyo iyo labo carruur oo ay dhashay oo lagu diley deegaan ka tirsan Warsheekh